Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Inay Joojineyso Heshiiska Samuel Umtiti
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo ku dhawaaqday inay Joojineyso heshiiska Samuel Umtiti
November 22, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ay bur-buriso heshiiska xiddiga Samuel Umtiti .
Ku guuleystaha Koobka Adduunka ayaa hoos u dhac ku yimid xilligii Ronald Koeman , welina ma uusan ciyaarin hal daqiiqo oo kubada cagta ah tartan kasta xilli ciyaareedkan.
Umtiti ayaa iska sii joogay Camp Nou xagaagan inkasta oo lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo meel kale, Barca ayaana loo maleynayay inay ka codsatay daafaca dhexe inuu baxo Janaayo.
Si kastaba ha ahaatee, Sport ayaa sheeganeysa in Barca laga yaabo inay hadda si fudud u go’aansato inay joojiso heshiiska Umtiti ka dib markii uu diiday inuu dhimo mushaarkiisa oo dhan 208k ginni.
Umtiti ayaa ku guuleystay labo horyaal oo La Liga ah iyo seddex Copa del Rey intii uu ku sugnaa Barcelona, ​​isagoo labo gool u diiwaan geliyay 132 kulan, 28 jirkaan ayaa lala xiriiriyay inuu ku laabanayo Lyon xilli uu sii dhamaanayo heshiiskiisa Blaugrana.